“Hadaan Somali nahay federalism-kii shalay jiray waxba kumaanan lahayn, Addis-Ababa iyo dalka inaan wax ku yeelano daaye, Jigjiga iyo deegaan kena xor u maanan ahayn”. Madaxweynaha dawlada Somalida Itoobiya Mustafe Cagjar | Yool News
“Hadaan Somali nahay federalism-kii shalay jiray waxba kumaanan lahayn, Addis-Ababa iyo dalka inaan wax ku yeelano daaye, Jigjiga iyo deegaan kena xor u maanan ahayn”. Madaxweynaha dawlada Somalida Itoobiya Mustafe Cagjar
April 10, 2020 - Written by Yool News
“Xisbiga P. P Waa xisbi qaran oo matalaya dhamaan qawmiyadaha ku midoobay magaca Ethiopia, majirto cid gaar u leh, Ama safka hore kujirta, Waa mid loo simanyahay xisbigu Waa mid si dhaba u qeexaya federalism-ka.
Hadaan Somali nahay federalism-kii shalay jiray waxba kumaanan lahayn, Addis-Ababa iyo dalka inaan wax ku yeelano daaye, Jigjiga iyo deegaan kena xor u maanan ahayn.
Maahan xukuumadu waxay u dulqaadan karto IN Dad afkaar xagjirnimo iyo Ururo Astaan qabaliya kudhisan inay bulshada phobia iyo khal-khal kagaliyaan horumarka. Waana mid talaabo sharci ah laga qaadi doono ciddii lagu helo falkan”.